Xabi Alonso Oo Ku Dooday In Barcelona Ay Valencia & Real Madrid Dhibco Ku Lumin Doonto Isaga Oo Xusay In Real Madrid Ay Ka Soo Kabsan Doonto 10-ka Dhibcood Ee Looga Horeeyo La Liga. – WWW.Gool24.net
Halyaygii hore ee xulka qaranka Spain ee Xabi Alonso ayaa niyada u dajiyay jamaahiirta kooxdiisii hore ee Real Madrid isaga oo tilmaamay in Barcelona ay dhibco lumin doonto kulamada Valencia iyo El Clasico isla markaana ay wax walba isbadal karaan. Xabi Alonso ayaa ka hadlayay xaflada xayasiin ah oo ay isaga iyo xidiga Atletico Madrid ee koke ay ka qabgaleen.
Barcelona ayaa 10 dhibcood hogaanka La Liga kaga haysa Real Madrid laakiin Alonso ayaa aaminsan in kulamo badani ay ka hadhsan yihiin horyaalka La Liga isla markaana ay kooxda Valverde dhibco ku lumin doonto kulanka ay booqan doonan kooxaha Valencia iyo Real Madrid. Real Madrid ayaa kulanka Estadio Santiago Bernabeu haysata fursad ay ku shaqaysan karto.
Xabi Alonso oo qalbi u dhisaya jamaahiirta iyo kooxdiisii hore ee Real Madrid isla markaana aaminsan in wax walba isbadali doonaan ayaa yidhi: “Waxaa jira wax badan oo horyaalka ka hadhay isla markaana waqti kooban wax walba way isbadali karaan”.
Xabi Alonso ayaa xusay in Real Madrid ay soo kabsan doonto isla markaana ay Barcelona dhibco lumin doonto kulamada Bernabeu iyo Valencia wuxuuna yidhi: “Waxaa waajib kugu ah in aad sii wado aaminsanaanta Real Madrid sababtoo ah waa koox aad u fiican, sidoo kale Barcelona dhibco ayay iyaga iyo Valencia ku lumin kartaa”.
Intaa kadib Alonso ayaa difaacay Crisitano Ronaldo isaga oo sheegay in uu waqtiyada muhiimka ah uu wax go’aamin doono wuxuuna yidhi: ” Cristiano Ronaldo waxa uu noqon doonaa mid go’aamiya waqtiyada waa wayn, anigu waxaan u arkaa sidii markasta ee rabitaanka iyo xamaasada uu ku sii wado gool dhalinta iyo koobab ku guulaysiga”.
Xabi Alonson ayaa aaminsan in Real Madrid ay markale tahay kooxda ugu cad cad Champions Leaque laakiin waxa uu sidoo akle soo qaatay magacyada kooxihiisii kale ee Bayern Munich iyo Liverpool inkasta oo ay Reds ayna wali si rasmi ah u xaqiijisan wareega 16 ka kooxood.
Alonso ayaa oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: ‘Real Madrid markasta waxay soo ahayd kooxda ugu cad cad, sababtoo ah waxay ku soo guulaysteen labadii ugu danbeeyay. Liverpool iyo Bayern Munich ayaa sidoo kale halkaas jooga waxaanan rajaynayaa in ay wax fiican samayn doonaan”.